DEG-DEG: Tottenham Oo Ficil Doqoniimo Ah Oo Uu Sameeyay Oo Kaa Yaabinaya Ku Ganaaxaysa Daafaceeda Serge Aurier - Gool24.Net
DEG-DEG: Tottenham Oo Ficil Doqoniimo Ah Oo Uu Sameeyay Oo Kaa Yaabinaya Ku Ganaaxaysa Daafaceeda Serge Aurier
May 21, 2020 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Premier League ee Tottenham ayaa qorshaynaysa inay ganaax gadhka u geliso daafaca midig ee kooxdeeda ee Serge Aurier kaas oo markii saddexaad jabiyay sharciga joogista guryaha ee uu keenay caabuqa dunida ku fiday ee Korona.
Madaxda sarre ee Tottenham ayaa aad uga cadhaysan talaabadii ugu dambaysay ee uu qaaday Aurier oo toddobaadkii mushahar ahaan 70,000 oo Pound uga qaataa waxaana ay doonayaan inay mushaharka laba usbuuc ku ganaaxaan.
Arrintan ayaa marka laga yimaado ganaaxa lacageed ee uu Aurier kula kulmayo, waxa ay sidoo kale halis gelinaysaa mustaqbalkiisa kooxdaas walow ay ku xidhnaan doonto xaalada suuqa kala iibsiga marka uu suuqu ugu dambayn dib u furmo.
Madaxda ugu sarreysa Spurs ayaa dareensan in waxa uu Aurier samaynayaa ay yihiin ka bad-badis isla markaana uu kooxda ceeb iyo fadeexad usoo jiiday mudada loo karantiimaysnaa xanuunka.
Ugu horreynba, Daafaca ree Ivory Coast ayaa sharciga jabiyay isaga oo u tagay saaxiibkiisa kooxda ee Moussa Sissoko kaas oo la arkay iyaga oo wada samaynaya tababar.
Intaas kaddib Tottenham ayaa labada xiddigba u digtay iyadoo ay labadooduba ugu dambayn bixiyeen raaligelin isla markaana ay wax ugu deeqeen ururka caafimaadka ee NHS.
Dhacdada haatan loo haysta Aurier ayaa ah mid aan muhiim ahayn qofkastana uu la yaabayo waana inuu baxay oo uu u tagay ra’iis (Timo-Jarre) si tinta loogu jaro isagoo intaas kaddib sawiradiisa soo dhigay barta Instagram.